musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Tourism mari yakatemwa sekufamba kwakawanda kuenda kuHawaii
Hawaii Kupwanya Nhau • HITA • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Kamaainas • nhau • Kuvakazve • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Kufamba kuenda kuHawaii
Imba yeHawaii neSeneti yakavhota nezuro kukunda gavhuna waGavhuna David Ige weImba Bill 862 muchikamu chikuru chine chekuita nekushanya. Kunyanya sekuenda kuHawaii Tourism Authority (HTA) bhajeti inoenda, bhiri iri richacheka iro bhajeti kubva paUS $ 79 miriyoni kuenda kuUS $ 60 mamirioni uye nekuderedza mabasa eVane masimba.
HTA ikozvino ichafanirwa kukumbira mari kubva kudare reparamende gore rega rega sevamwe vehurumende.
Bhiri iri rinopa mamirioni makumi matanhatu emadhora kubva kuAmerican Rescue Plan Act yegore razvino remari.
Zvakare zvinosanganisirwa mubhiri ndezve shanduko kumitero yekugara yekugara inozopa vashanyi zvakawanda kugara mumahotera.
Imba Bhiri 862 inobvisawo mutero wekugara wekugara kumatunhu uye unovapa mvumo yekumisikidza mutero wedunhu wekugara padanho risingapfuure 3 muzana pamusoro pemutero wehotera yenyika ye10.25 muzana.
Iyo inobvisa zvakare iyo TAT-yakabhadharwa mari yekushanya yakakosha homwe uye kudzima mimwe mibairo yemabhadhariro epakeji kumutungamiri uye mukuru mukuru we HTA inoshanda Ndira 1, 2022. Iyi ndiyo sosi yekutanga yemari.
Pamusoro pezvo inodzora kuregererwa kweHTA kubva kune kodhi yekutenga yeruzhinji uye zvakare inoderedza pekugara mutero pekugovaniswa mutero kunzvimbo yekokorodzano bhizinesi rakakosha homwe.
State Rep. Sylvia Luke (D), anomiririra Punchbowl, Pauoa, naNuuanu, vakataura kuti kukunda veto kuri kubhadharisa vashanyi kuitira kuti vabatsire kubhadhara izvo zvavanoshandisa. Vati Mutero Wepamberi pekugara Mutero - kana mutero wehotera - kuwedzera kwe3 muzana kuchazadzisa izvi. Uye zvakare, mutero wemotokari inorehwa uchasimudzwa muzita rekuchengetedza manejimendi manejimendi.
State Rep. Gene Ward (R), anomiririra Hawaii Kai neKalama Valley, vakavhota vachipokana nemutemo uyu vachiti bhiri iri riri kutumira HTA meseji yekuti havadi nzira yavari kutarisira chikamu chavo mukushanya kweHawaii.